Scoutmob: Ezigbo oge Mpaghara Mpaghara | Martech Zone
Enwere mmeghachi omume agwakọtara na ụlọ ọrụ azụmahịa kwa ụbọchị ebe ihe mgbu nke iwelata oke ihe fọrọ nke nta ka ọ kpochapụ ụfọdụ azụmaahịa ndị jiri ọrụ ahụ. Okpokoro na-egosi na ị na-eme ihe dịtụ iche, na-enye ezigbo oge, ụgwọ ịkwụ ụgwọ maka azụmaahịa. Scoutmob bụ ngwa e kesara ndị na-eri ihe na gam akporo, iPhone na Blackberry ebe ndị mmadụ nwere ike nbanye wee lelee azụmahịa, mana jiri ya naanị mgbe ha dị njikere.
Site na Okpokoro Ajụjụ:
Kedu ka Scoutmob si dị iche na saịtị ndị ahụ "na - azụta"? Scoutmob yiri ha n'ụzọ ụfọdụ, mana ha dị nnọọ iche na ndị ọzọ. Dị ka saịtị ndị a, anyị na-enye ozi email kwa ụbọchị nke dị maka awa 24. Mana n’adịghị ka “ndị otu na-azụta” saịtị ebe ahụ, anyị anaghị achọ ịkwụ ụgwọ n'ihu site n'aka ndị ahịa ahụ, yabụ ị ga-ewepụkwu ego gị tara ahụhụ. Nke a na - enye ndị bi n’ime obodo ihe na - akpali ha inyocha nhọrọ ha. Karịa nke ahụ, ikpo okwu mkpanaka anyị na-agba ndị ahịa a na-akwụ ụgwọ ume ịlọghachi maka azụmahịa ọzọ. Anyị na-enyekwa naanị ụlọ ọrụ dị na mpaghara, yabụ akara gị so n'etiti ụfọdụ kachasị mma obodo gị nwere inye.
Gịnị bụ ahụkarị ndibiat? Anwansi nke Scoutmob “% off” amụọ bụ na ha na-eme ka ndị ahịa igwe mmadụ dị elu mebie omume ha ma nye azụmahịa gị ịnwale, yabụ ihe niile anyị na-arịọ bụ na ị ga-enye ndị na-agba anyị egwuregwu dị egwu. Mgbe ahụ, anyị na-echebe gị site na ịwepu ego na naanị ị na-akwụ gị ụgwọ mgbe ndị ahịa anyị kpebiri na ha chọrọ ịnwale azụmahịa gị.
Kedu mgbe a ga-egosi m? Ndị otu anyị ga - eso gị rụọ ọrụ wee hazie ụbọchị kacha mma iji gosipụta azụmaahịa gị. Mgbe ahụ, anyị ga-esoro gị mepụta ihe ederede Scoutmob pụrụ iche, na-eme ka ndị ahịa anyị (na ndị enyi ha niile) nụrụ banyere azụmahịa gị.
Ogologo oge ole ka azụmahịa na-adịru? Azụmaahịa gị ga-abụ atụmatụ nke email anyị na weebụsaịtị maka otu ụbọchị. Mgbe ahụ, nkwekọrịta gị ga-anọ ọnwa atọ. Zọ a, enwere ọsịsọ na onyinye a pere mpe, mana enwerekwa oge zuru oke maka ndị ahịa mkpanaka ịga ụzọ (ma bụrụ ndị na-achịkwa).
Ego ole ka ọ na-eri? Ruo ugbu a, naanị otu ụzọ isi kpọsaa na mpaghara bụ ịkwụ ụyọkọ ego n'ihu, na-atụ anya na ozi ahụ jidere, wee gafee mkpịsị aka gị maka njem ụkwụ. Na Scoutmob, anyị na-arịọ maka ịkwụ ụgwọ ozugbo ndị ahịa anyị kwụrụ gị ụgwọ. Chọrọ ịmatakwu banyere ọnụahịa? Pịa ebe a iji soro ndị Scoutmob kpaa maka ọnụahịa.
Ego ole ka esi akwu m? Na-akwụ gị ụgwọ otu esi akwụ gị ụgwọ: ndị ahụ nwere afọ ojuju na-abịa ịnụ ụtọ onyinye gị. Mgbe nke ahụ gasị, ị na-akwụ anyị ụgwọ naanị ọnụ ọgụgụ ndị na-agba Scoutmob kwuru na ha chọrọ.
Tags: azụmahịa obodo